Ukuzivocavoca Nokuqeqeshwa - Vondt.net
Okokulondolozwa kwesigaba: Ukuzivocavoca Nokuqeqeshwa
4 Ukuzivocavoca Ukulwa Ne-Meningitis
30 / 11 / 2016 /Amazwana we-0/i Ukuzivocavoca Nokuzivocavoca /av olimalayo
Ngabe uphethwe yi-osteomyelitis futhi ukhathele kahle ngayo? Nakhu ukuzivocavoca okuhle okungu-4 okungaqinisa imisipha efanele futhi kukusize uvikele i-osteomyelitis.
Uma unemibuzo maqondana nokuzivocavoca umzimba, izinketho zokwelashwa noma ukuqeqeshwa, wamukelekile ukuxhumana nathi nge- Facebook noma Isiteshi sethu se-YouTube.
I-Osteomyelitis ivame ukuvela kaningi ngaphandle kwendlela efanele
Uqale kahle ngokugijima, kodwa-ke kuyenzeka… futhi. I-Osteomyelitis in futhi. Zimbalwa izifo ezihlolisisayo ezidala ukucasuka nokukhungatheka njenge-osteomyelitis ephindaphindwayo. Ulwelwesi lwethambo luhlala phakathi kwamathambo amabili omlenze emlenzeni ongezansi; i-tibia (i-tibia yangaphakathi) ne-fibula (i-tibia yangaphandle). Ukulayishwa ngokweqile noma ukulayishwa okungalungile kungaholela ekuphenduleni kokuvuvukala kwezicubu, okuveza ubuhlungu lapho kugcizelelwa unyawo neqakala.
Kulesi sihloko uzofunda kabanzi mayelana, phakathi kwezinye izinto:
1. Kungani uthola i-osteomyelitis?
2. Yini ebangela ukuphindaphindeka kwe-osteomyelitis?
3. Izici ezinobungozi ze-Osteomyelitis
4. Ukuzivocavoca Nokuzivocavoca Ngokulwa ne-Osteomyelitis
5. Ukwelashwa kanye nokuzimela ngokumelene ne-Osteomyelitis
Ngabe kukhona omaziyo ophethwe iLOT nge-osteomyelitis? Zizwe ukhululekile ukuhlanganyela nabo le ndatshana.
Chofoza inkinobho engezansi ukuze uhlanganyele i-athikili kwezokuxhumana - uma ufisa.
Ngabe uyazibuza okuthile noma ufuna ezinye zokugcwalisa okunje ngochwepheshe? Silandele ekhasini lethu le-Facebook «Vondt.net - Siyabuqeda ubuhlungu bakho»Noma Isiteshi sethu se-YouTube (ivula ngesixhumanisi esisha) ukuthola izibuyekezo zezempilo zansuku zonke nezinhlelo zokuzivocavoca mahhala.
Kulesi sihloko sizogxila ekuqiniseni ama-musculature anganciphisa futhi anciphise umthwalo wethonya kule ndawo - lokhu kungenziwa, phakathi kwezinye izinto, ngu qinisa imisipha ye-hip, imisipha ekhazimulayo namathe ezinyawo. Zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi nge ikhasi lethu le-Facebook uma unamazwana, okufakwayo noma imibuzo.
I-Osteoarthritis nobuhlungu obuhambisana nayo kwi-retina kungenxa yokuxinana kwezicubu ezithambile ezinamathela kwi-tibia kanye nemisipha eseduze. Lokho wukuthi, umthwalo ungaphezu kwamandla akho - nokuthi kwakheka izicubu ezonakele esikhundleni sezicubu ezijwayelekile endaweni ethintekile. ISkadevev ilungiswa ngokuphelele izicubu ezithambile (njengoba kuboniswe lapha) futhi ingahle ibe yinto eyandulelayo kwenye izicubu zesilonda.
Lokhu kuhlangana kubangela izicubu ukuba zivuvukale bese kufaka ingcindezi kwi-tibia - okuholela kuzo zombili izinhlungu, ukuvuvukala nokuvuvukala. Ukubalwa ngakho-ke kulula. Kufanele wenze umthamo wakho, kanye nokuphulukisa, ukweqa umthwalo obeka kulo ulwelwesi lwamathambo. Ngale ndlela, bazokwazi ukuzilungisa phakathi kokuzivocavoca futhi uzokwazi ukubuyela enjabulweni yokugijima nokuhamba amabanga amade futhi. Esigabeni esilandelayo, sizokhuluma kabanzi ngezinto ezinobungozi, izimbangela nezinye izinto okufanele wazi.
2. Recurrent Osteomyelitis = Imvamisa Ukungasebenzi Kwemisipha NamaTendon
Iqiniso elinzima ukuthi ubuthakathaka kakhulu ukumelana nenani lengcindezi obhekene nalo. Isizathu esivamile ukuthi ukhuphule inani loqeqesho ngokushesha okukhulu. Ungalokothi kumnandi ukuzwa, kepha kunjalo. Ngakolunye uhlangothi, okuhle impela ukukuzwa ukuthi kukhona ongakwenza mayelana nalokhu ngokubhekana nezizathu ezilandelayo.
- Izakhiwo Ze-Anatomical Ezikhulula Ulwelwesi Lomlomo
Ulwelwesi lwamathambo luxhomeke kwezinye izakhiwo eziningana ukuzikhulula nokunciphisa imithwalo eshaqisayo. Uma kwenzeka ubuthakathaka bemisipha ezakhiweni ezithinta ukushaqeka, ngaleyo ndlela sithola ukulayisha ngokweqile - futhi umphumela kuba yi-osteomyelitis. Imisipha ebaluleke kakhulu eqeda umnkantsha itholakala ku:
Ngakho-ke uncike ngqo ekusebenzeni, ukuguquguquka kwamandla namandla kulezi zakhiwo ukuze ukwazi ukukhulula ulwelwesi lwethambo. Amandla andisiwe namandla emaqenjini emisipha ashiwo nawo anenzuzo enkulu yokuthi angavimbela izinkinga zamadolo nokunye ukulimala kwezemidlalo. Futhi qaphela ukuthi sisho ukuguquguquka - okusho imiphumela emihle yokuhamba ngokuhlanganyela. Eyodwa okhalweni oluqinile, iqakala noma emuva ayinakho ukuzivumelanisa nezimo noma ukugoqa okufana nesinqe nokunyakaza okujwayelekile. Lesi yisizathu esivamile esenza ukuthi ngisho nabantu abanamandla nabo baphathwe yi-osteomyelitis - abanakho nje ukuhamba okwanele ukubhekana nemithwalo eshaqisayo.
3. Izici Zobungozi: Zazi Ubuthakathaka Bakho
Masibe qotho. Iningi lethu liyabazi obunye ubuthakathaka bethu - futhi ilapho kanye okufanele uqale khona. Uma unemisipha ye-hip ebuthakathaka kakhulu noma imisipha eyinhloko-ke uhlakaniphile ukuyiqeqesha. Noma uma wazi ukuthi use- ezinyakazayo njengethanga lomhlane ophansi khona-ke lokhu kufanele kube ukugxila kwakho okuyinhloko.
Ezinye izinto okufanele uzigweme ngesikhathi sokuqeqeshwa yilezi:
Musa ukugijima kakhulu emithambekeni.
Ungagijimi ngezicathulo ezigugile, ngoba lezi zinokuhlangana okungafanele.
Gwema ukusebenzisa kakhulu i-asphalt nezinye izindawo ezifanayo.
Gwema ezemidlalo ezibandakanya "ukuqala nokuyeka" okuningi.
Abantu abanezinyawo ezibucayi namarches aqine kakhulu bathambekele kakhulu kwi-meningitis. Uma uthintwa yizinyawo eziyizicaba noma amakhothamo aqinile, kufanele futhi ugxile kakhulu ezicathulweni ezinhle ezinokusonga okwengeziwe, amasokisi wokucindezela wokugijima (bona isibonelo lapha - isixhumanisi sivuleka ewindini elihlukile), kanye nokuhlolwa kwama-insoles (ucwaningo lukhombisile ukuthi okuhlukile okushibhile kusebenza ngokufana nalokho okubizayo, ngakho ungakhohliswa). Futhi khumbula ukuthatha isikhathi esanele sokululama phakathi kweseshini - kuthiwani ngeseshini yokubhukuda phakathi kwama-run? Abanye basebenzisa futhi amasokisi wokucindezelwa, njengalawo esiwakhulume ngenhla, ukukhuthaza ukusakazeka okwandayo emilenzeni nasezinyaweni lapho bephumula. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi amasokisi afana nalawa anganciphisa ukusabela okungadingekile koketshezi nokuvuvukala (i-edema), futhi kukhuthaze ukululama okusheshayo.
Ngakho-ke kwase kuyisikhathi sokuvivinya umzimba okune esikuthembisile. Sigxile ohlelweni lokuqeqesha olugxile kokubandakanya izivivinyo ezine. Muva nje, senze nevidiyo yokuqeqesha i-osteomyelitis equkethe izivivinyo ezinhlanu - ngevidiyo engezansi kwencazelo yalezi zivivinyo ezine.
1. Ukuphakanyiswa komlenze okulandelayo (nge noma ngaphandle kokuzivocavoca)
Njengoba sishilo ekuqaleni, ukuqina kwe-hip kuyisihluthulelo uma kukhulunywa ngamathambo anempilo futhi anempilo emilenzeni. Lokhu kungenxa yokuthi imisipha ye-hip inengxenye enkulu yomthwalo wemfanelo maqondana nomthelela wethonya lapho sihamba futhi sigijima.
Ngamanye amagama, i-hip eqiniswe kahle ingavimbela ngqo isifo samathambo nokuqunjelwa. Nakhu ukuthi ungakwenza kanjani umsebenzi: Lala ohlangothini ngesandla esisekayo phambi kwakho nesandla sokuphumula kwekhanda.
Bese uphakamisa umlenze ongenhla ngokunyakaza okuqondile (ekuthumbeni) kude komunye umlenze - lokhu kuholela ekuqeqeshweni okuhle kwesihlalo esijulile nemisipha ye-hip. Phinda umsebenzi Izimpindiselo eziyi-10-15 amasethi angaphezu kwama-3 - ezinhlangothini zombili.
2. Ukuphakamisa uzwane / ukuphakamisa uzwane
Ukuphakamisa izinzwane kuyinto yokuzivocavoca ebaluleke kakhulu kulabo abathanda ukugijima noma ukugijima - okunye kokuzivocavoca okubaluleke kakhulu uma kukhulunywa ngokuvikela i-osteomyelitis / irritation - noma wena othanda ukuhamba ngemilenze ngaphandle kwezifo.
Ngakho-ke kungenye yezindlela zokuvivinya ezingcono kakhulu ongayenza uma ufuna ukuvimbela izinkinga zonyawo, i-ankle, umlenze kanye nedolo. Qala ngakho namuhla.
Isikhundla A: Qala ngezinyawo zakho esimweni sokungathathi hlangothi.
Isikhundla B: Phakamisa izinzwane zakho kancane - ngenkathi uphonsa ubheke ebhola lezinzwane.
- Yenza Izimpindelo eziyi-10 phezu Amasethi ama-3, ie 3 x 10.
3. "Ukuhamba nge-monster" nge-elastic
Olunye lwezivivinyo esizithandayo, ngoba alusebenzeli nje kuphela imilenze yakho kodwa futhi luwukuzivocavoca okusebenzayo kwamadolo, okhalweni nesinqe. Ngemuva kwesikhashana nje nalesi sivivinyo uzozwa ukuthi sishisa ekujuleni kwemisipha yesihlalo, kodwa ngendlela enhle.
Thola ibhendi yokuqeqesha (okungcono iguqulelwe lolu hlobo lokuzivocavoca - ongaboshwa ngawo womabili amaqhubu njengasesiyingi esikhulu.
Bese ume ngezinyawo zakho zihlukaniswe ububanzi emahlombe ukuze kube nokumelana okuhle kusuka kwibhande kuya emaqakaleni akho. Bese uhambe, ngenkathi usebenza ukugcina imilenze yakho ibanzi, okufana neFrankenstein noma i-mummy - yingakho igama. Ukuzivocavoca kwenziwa 30-60 imizuzwana phezu Ama-2-3 amasethi.
4. "Ukuphala uzwane ngethawula"
Ukuzivocavoca okuhle kakhulu okuqinisa i-blade yonyawo nemisipha yonyawo ngokuphumelelayo. Njengoba kushiwo ngaphambili, izicubu zomzimba wakho ukuzivikela kwakho okokuqala uma kuziwa ekugijimeni nasekusebenzeni kahle. Ukuqina izicubu onazo ezinyaweni zakho, ithuba elincane lokulimala nokulayisha ngokweqile.
Hlala esihlalweni ubeke ithawula elincane phansi phambi kwakho
Beka ibhola lebhola elingaphambili ngenhla nje kokuqala kwethawula eliseduze kwakho
Yolula izinzwane zakho bese ubamba ithawula ngezinzwane zakho njengoba ulidonsela kuwe - ngakho-ke lihamba ngaphansi konyawo lwakho.
Bamba ithawula umzuzwana owodwa ngaphambi kokukhulula
Khipha bese uphinda - uze ufike ngakolunye uhlangothi lwethawula
Ngenye indlela ongayenza Ukuphindaphinda okungu-10 ngaphezulu kwamasethi ama-3 - Kuncono nsuku zonke ukuze uthole umphumela ongcono.
IVIDEO: Ukuzivocavoca Ama-5 Ngokulwa Ne-Meningitis
I-VIDEO: Amandla E-10 Amandla Okuzivocavoca Ngokumelana Nezinhlungu Ezihlungayo
Ngemuva kwakho konke, sigcizelele ukubaluleka kwe-hip esebenzayo futhi eqinile, ngakho-ke nazi izivivinyo eziyishumi ze-hip kuwe owaziyo ukuthi lokhu kungenye yobuthakathaka bakho. Lokhu kungenziwa kuze kube kane ngesonto futhi kufanele wonke umuntu. Kepha khumbula ukuthi ukuqhubeka ngokuhamba kwesikhathi okubalulekile uma kukhulunywa ngokuqeqeshwa.
Joyina umndeni wethu! Zizwe ukhululekile ukubhalisa mahhala esiteshini ukuze uthole izinhlelo eziningi zokuzivocavoca nezibuyekezo zezempilo ezifundisayo.
Ukwelashwa kanye nezinyathelo zokuzivikela ngokumelene ne-Osteomyelitis
Ukwelashwa Kwemisipha Yomlenze Oqinile Nezinyawo Ezibuhlungu
Ukwelashwa kwegagasi lokucindezela ngokumelene ne-periosteum
Izinyathelo ezinhle zokuzibandakanya zifaka amasokisi okucindezelwa namabhola okubhucunga
Ekwelapheni i-osteomyelitis, udokotela uzohlola ukusebenza komlenze, unyawo kanye neqakala. Imvamisa, ukuhlolwa okusebenzayo kuzoveza ukungezwani okucacile kwemisipha emilenzeni nasezinyaweni. Zombili lezi zinto zingaba nomthelela ngqo kwi-osteomyelitis, ngoba zithinta ukumunca okushaqisayo konyawo neqakala. Ngaphezu kwalokhu, imisipha yethole eqinile futhi eshubile ingaba nomthelela oqondile ekuhambeni kweqakala. Iqakala eliqinile nalo alisizi ngalutho uma kukhulunywa ngokugijima nokulayisha umthwalo. Izinqe nomhlane nakho kudlala indima enkulu lapho kugijima - ngakho-ke nakho kubalulekile ukuthi uhlolwe. Ngokukhuluma ngalezi zinto ngokulungiswa kwemithambo yezemidlalo, ukusebenza kwemisipha, ukugqugquzelwa ngokuhlanganyela kweqakala kanye ne-hip, noma i-pressure wave therapy, umuntu angabuyisa ukusebenza okujwayelekile.
Noma yiluphi uhlobo lwemithi yokwelashwa luyohlale luyehluka ngokuya ngesiguli ngasinye, kepha kokubili ukwelashwa kokutholwa kokuhlinzwa nokucindezelwa kwegagasi kusetshenziselwa i-osteomyelitis. Lezi zindlela zokwelashwa zivame ukwenziwa ngudokotela wezitho zomzimba noma i-chiropractor yanamuhla. Izifundo zocwaningo, kufaka phakathi ezishicilelwe kumagazini wezokwelapha I-American Journal Yezemidlalo Yezokwelapha, kukhombisile ukuthi i-pressure wave therapy inomphumela obhalwe kahle wokulwa ne-osteomyelitis (1). Wonke umuntu iminyango yethu yomtholampilo engeyeVondtklinikkene inezinsizakusebenza ze-state-of-the-art pressure wave wave, kanye nobungcweti kwezokushopa kwezemidlalo.
Ukuzenzela: Yini Engingayenza Mina Nge-Osteomyelitis?
Ukwazi nokuzikala okuhle kuhlale kuyinzuzo. Lapho sincoma izinyathelo zethu, sikhathazeka kakhulu ngezinyathelo ezingasetshenziswa njalo nezisiza ukubhekana nembangela yenkinga. Ngakho-ke, izincomo zethu ezintathu lapha zifaka phakathi izindlela zokuvikela nokwelashwa.
Isincomo No. 1: Amasokisi wokucindezela uMlenze noNyawo
Isinyathelo esilula nesincane esisebenza kakhulu maqondana nempilo yonyawo nomlenze ongcono. Ukugqoka amasokisi wokucindezelwa lapho usebenza, kepha futhi nalapho uphumule, kunganikeza izinzuzo eziningi. Siyazi, phakathi kwezinye izinto, ukuthi inikeza ukwanda kokujikeleza kwegazi, kanye nokululama ngokushesha. Enye yezinzuzo zokugijima ukuthi kungasiza ukuvimbela i-lactic acid buildup emisipheni. Amasokisi wokucindezela (isixhumanisi sivuleka ewindini elisha) ngakho-ke kuyinto esivame ukuyincoma ezigulini ezinenkinga yemilenze - kufaka phakathi i-osteomyelitis.
Isincomo No. 2: Trigger iphuzu Amabhola
Ukubhucunga amabhola kungasetshenziselwa ukuvuselela ukusakazeka kube yimisipha yenkonyane ekhathele. Futhi aphelele ngokuphelele ekusetshenzisweni ngaphansi kwamathe ezinyawo - futhi angasiza ekunikezeni i-fascia ye-plantar esesimeni esincane (ipuleti le-tendon ngaphansi konyawo). Et isethi ephelele ngosayizi abahlukene bamabhola wokubhucunga (bona isibonelo lapha - isixhumanisi sivuleka ewindini elisha) singenza kube lula ukusisebenzisa engxenyeni enkulu yemisipha yomzimba. Zisebenzise zonke ezinye izinsuku ngokumelene nemilenze nezinyawo zombili - mhlawumbe nasesinqeni nasesihlalweni. Ngale ndlela, imisipha inesikhathi sokululama phakathi kweseshini.
Isincomo No. 3: Ukuziqeqesha neMiniband
Imichilo emincane ingukunwebeka okuhle kokuqeqeshwa kwakho ofuna ukuqeqesha okhalweni lwakho, emuva nasesinqeni ngendlela ephephile. Ukuziqeqesha nge-elastic kungakusiza ukuhlukanisa imisipha ngendlela ephumelelayo futhi emnene. Njengoba ukwazi ukubona, sibuye sisebenzise lokhu kokuzivocavoca okunconyiwe kuhlelo lwethu lokuqeqesha. Lokhu kungaba nomthelela emiphumeleni engcono ekuqeqeshweni kwakho. Sincoma ngenjabulo amaribhoni amancane aluhlaza (aphakathi nendawo) kulabo abangazange baqeqeshe kakhulu ngokunwebeka phambilini. Ngemuva kwalokho ungathuthukela kokuluhlaza okwesibhakabhaka (okuphakathi kanzima) ekugcineni. Phrinta wakhe ukubona izibonelo nokufunda kabanzi ngama-minibars (isixhumanisi sivuleka ewindini elisha).
Ngabe kukhona omaziyo onenkinga ye-Osteomyelitis? Zizwe ukhululekile ukuhlanganyela nabo le ndatshana.
Ngabe Ufuna Ukubonisana noma Unemibuzo?
Zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi ku YouTube noma Facebook uma unemibuzo noma okunye mayelana ne-osteomyelitis. Ungabona futhi ukubuka konke kwe- imitholampilo yethu ngesixhumanisi lapha uma ufuna ukubhukha ukubonisana. Eminye yeminyango yethu yeMitholampilo Yezinhlungu ifaka phakathi Isikhungo se-Eidsvoll Healthy Chiropractor kanye nePhysotherapy (UViken) no Isikhungo seLambertseter Chiropractor nePhysiotherapy (Oslo). Nathi, ikhono lobuchwepheshe nesiguli kuhlala kubaluleke kakhulu.
(Bheka ukubuka konke lapha bese uthola umnyango eduze kwakho)
IPHEPHA LOKUQALA: - Okufanele Ukwazi Nge-Osteoarthritis Yezinqulu
Chofoza esithombeni noma kusixhumanisi ngaphezulu ukuze uqhubeke ekhasini elilandelayo.
Zizwe ukhululekile ukusilandela ku-Social Media
(Sizama ukuphendula kuyo yonke imiyalezo nemibuzo kungakapheli amahora angama-24. Singakusiza futhi ukukutshela ukuthi yikuphi ukuvivinya umzimba okulungele inkinga yakho, sikusize uthole abeluleki abaphakanyisiwe, ukutolika izimpendulo ze-MRI nezinkinga ezifanayo.
1. URompe et al, 2010. Ukwelashwa kwe-wave ye-low-energy extracorporeal therapy njengokwelashwa kwe-medial tibial stress syndrome. Am J Ezemidlalo Med. 2010 Jan; 38 (1): 125-32.
Izithombe: I-Wikimedia Commons 2.0, i-Creative Commons, iFicestockphotos futhi ifake iminikelo yabafundi.
https://www.vondt.net/wp-content/uploads/Beinhinnebetennelse.jpg 400 650 olimalayo https://www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png olimalayo2016-11-30 10:23:302021-09-12 16:00:034 Ukuzivocavoca Ukulwa Ne-Meningitis
4 Ukuzivocavoca ngokumelene Nemisipha Node emuva
07 / 06 / 2017 /Amazwana we-0/i Imisipha kanye ne-Skeleton, Ukuzivocavoca Nokuzivocavoca /av olimalayo
Qina emhlane ekuseni? Ngabe iyasebenza emisipha emuva?
Zama lezi zivivinyo ezi-4 ezingakusiza ukhulule ukungezwani kwemisipha futhi uqinise imisipha emhlane wakho. Zizwe ukhululekile ukwabelana nomngane noma ilungu lomndeni elikhathazwa yimisipha eqinile yangemuva. Iningi labantu liyazuza ngokufunda ezinye izivivinyo zamafindo emisipha ngemuva.
Nazi izivivinyo ezi-4 ezingqinisa imisipha eqinile, zandise ukuhamba kwegazi futhi zibe nomthelela ekunyakazeni okwengeziwe emisipha nasekuhlanganeni. Imisipha eqinile kanye nokuqina kwemisipha ngemuva kuvamile. Lezi zivivinyo zingakusiza ukunciphisa ukungezwani kwemisipha owakha usuku lonke.
Ukuzivocavoca kufanele kuhambisane nesimo sakho sempilo. Ukwelashwa ngomtholampilo ogunyazwe esidlangalaleni kungadingeka ngokuhambisana nokuqeqeshwa ukuze uthole ukululama okuhle. Lezi zivivinyo ezi-4 zigxile kakhulu ekwandiseni ukuhamba kanye nokukhulula amafindo emisipha. Zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi ekhasini lethu le-Facebook uma unokufaka noma ukuphawula.
Amathiphu amahle: Ukuqeqesha amavidiyo nokuzikala
Skrolela ngezansi ukuze ukubuka amavidiyo amabili amahle wokuqeqesha ezingakusiza ukhulule izicubu zomhlane ezishubile, zithuthukise ukujikeleza kwegazi futhi zikhulule izinhlungu emuva. Ngezansi kwe-athikili, ungafunda futhi ngezinyathelo zethu zokuzincoma ezinconyiwe.
I-VIDEO: Ukuzivocavoca Okuhlanu Ngokulwa Nealrration Emuva Ngenxa Yama-Muscle Node
Ukuqina izicubu zomzimba kanye nokuqina emuva kungadala ukucasuka kwezinzwa ezisebenzayo. Uma izinzwa zivele zicasulwe, lokhu kungenza ukuthi izicubu zikhululeke futhi zibe buhlungu. Nazi izivivinyo ezinhlanu ezihlukene zokuzivocavoca ezingakusiza ukhulule imisipha yangemuva nokulimala kwezinzwa okuhambisanayo.
Joyina umndeni wethu bese ubhalisela isiteshi sethu se-YouTube ngamathiphu wokuzivocavoca mahhala, izinhlelo zokuzivocavoca nolwazi lwezempilo. Siyakwamukela!
I-VIDEO: Ukuvivinya Amakhulu amahlanu Ngokumelana Nezimo Ezihlukumezayo Emgogodleni (Spinal Stenosis)
Isikhala esincishisiwe ngaphakathi komgogodla saziwa ngokuthi yi-spinal stenosis. Lezi zimo eziqinile ze-nerve zingaholela ekucasukeni kwezinzwa kanye nokuxinana kwezinzwa okungadala imisebe yomibili nokuqina kwebele emilenzeni, kanye nemisipha yesisu emnyama kakhulu. Qhafaza ngezansi ukubona izivivinyo ezinhlanu ezinhle kakhulu ezingakusiza ngokuhamba okungcono nokuxineka kwemisipha okuncane.
Ingabe ukujabulele amavidiyo? Uma ubasebenzisile, singabonga kakhulu ukuthi ubhalisela isiteshi sethu se-YouTube futhi usinike izithonjana zokuxhumana nabantu. Kusho lukhulu kithina. Ngiyabonga omkhulu!
Funda futhi: Okufanele Ukwazi Ngobuhlungu Bokubuyela Emuva
Ngokuhambisana nalezi zivivinyo, sincoma ukuthi uguqule ukunyakaza kwakho kwansuku zonke, ngokwesibonelo, ngendlela yokusebenza okumbalwa, umthwalo ophindaphindayo (mhlawumbe ungalungisa lapho usebenza khona?), Ukuhamba ngokwezifiso endaweni enolaka noma ukubhukuda echibini lamanzi ashisayo. Uma usuvele une-diagnostic diagnosis, sincoma ukuthi ubheke kudokotela wakho (udokotela, i-chiropractor, i-physiotherapist noma okufanayo) ukuthi ngabe lezi zivivinyo zikufanele yini.
1. Easy side ukugqugquzela (amadolo roller)
Ukuzivocavoca okuhlanganisa umhlane nokwelula imisipha eseduze. Kufanele zenziwe ngokuqapha nangokunyakaza okuthe ukuthula, okulawulwayo.
Ukuqala Isikhundla: Qamba amanga emhlane wakho - mhlawumbe ocansini lokuqeqesha olunomcamelo wama-headrest. Gcina izingalo zakho ziqonde ohlangothini abese edonsa imilenze yomibili eqonde kuwe. Zama ukuphumula umzimba wakho omkhulu njengoba uzivocavoca.
ukukhishwa: Vumela amadolo akho awe kancane ukusuka ngapha nangapha ngenkathi igcina i-pelvis yakho ngokwemvelo - qiniseka ukuthi amahlombe amabili agcinwa ahlangana nomhlaba. Yenza izivivinyo ngokunyakaza okumnene futhi ubambe isikhundla cishe imizuzu engu-5-10 ngaphambi kokuhamba kancane uye kolunye uhlangothi.
Ukuqamba amanga ukunwebeka kwesihlalo nomhlane ongezansi
Lokhu kuvivinya umzimba kunweba imisipha ekhazimulayo kanye ne-piriformis - eyokugcina iyisicubu esivame ukubandakanyeka ku-sciatica nase-sciatica. Lala phansi phansi umhlane ubheke phansi, okungcono kumata wokuzivocavoca onokwesekwa ngaphansi kwentamo yakho. Bese ugoba umlenze wangakwesokudla bese uwubeka phezu kwethanga lesobunxele. Bese ubamba ithanga lesobunxele noma umlenze wangakwesokudla bese udonsela kuwe ngobumnene uze uzwe ukuthi welulela ekujuleni ngemuva kwethanga nemisipha ekhazimulayo ohlangothini olulelayo. Bamba ubunzima imizuzwana engama-30. Bese uphinda ngakolunye uhlangothi. Kwenziwe ngaphezulu kwama-2-3 amasethi ohlangothini ngalunye.
Uhleli emuva emuva (welula umqolo ongezansi, i-piriformis nesihlalo)
Hlala kukhiye wokuzivocavoca noma okufanayo ngesimo esihle ngemuva engemuva (akumele kugobeke). Ngemuva kwalokho beka umlenze owodwa phezu kolunye bese ugoqa umzimba ngakolunye uhlangothi - kufanele uzwe sengathi weluleka kahle eceleni kwesihlalo nangaphandle kuya okhalweni. Ukwanda kokuguquguquka nokuhamba ngokwengeziwe kulo msipha kunganciphisa ingcindezi engemuva eliphansi futhi ngaleyo ndlela kusize ukwehlisa ukuqina komhlane ophansi. Bamba ukuzivocavoca imizuzwana engu-30 bese uphinda izinhlangothi zombili ngaphezulu kwamasethi ama-3.
4. Ukuzivocavoca ukwelula izicubu ezingemuva ze-foam roller
I-roller yama-foam ingaba ithuluzi elihle kakhulu lokukhulula kancane phakathi kwamahlombe ehlombe nasemhlane ongaphezulu. Ingasetshenziselwa ukwelula imisipha yakho - njengalo msebenzi owelula kahle ezicutshini zesifuba / i-pectoralis.
Nakhu ukuthi ungakwenza kanjani umsebenzi: Lala phansi ku-roller foam ukuze ube nokwesekwa entanyeni nasemhlane. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi lokhu kusebenza kuphela nama-roller amakhulu amagwebu anobude obungu-90 cm noma ngaphezulu. Bese welula izingalo zakho kancane uye eceleni bese uzihambisa phezulu uze uzwe ukuthi zolulela ngaseziciswini zesifuba. Bamba isikhundla amasekhondi angama-30 - 60 bese uphumule. Phinda amasethi ama-3-4.
Nazi izivivinyo ezi-4 zokucindezelwa kwemisipha ngemuva. Ukuqina kwemisipha nokuqina kwemisipha kuvame kakhulu, kepha kube nzima kakhulu. Lezi zivivinyo zingakusiza ukuthi unciphise ukuqina kwemisipha futhi wandise ukuhamba. Ukuqeqeshwa kufanele kuklanyelwe umuntu ngamunye.
Yini engingayenza ngimelene namafindo emisipha nokungezwani ngemuva?
Lo ngumbuzo esiwuthola cishe nsuku zonke imitholampilo yethu. Okokuqala nokubaluleke kakhulu, kubalulekile ukuveza ukuthi izinyathelo ezithile zizoba ngcono kwabanye kunezinye. Ngakho-ke, sikhethe ukugxila kuzeluleko ezijwayelekile lapha. Izimbangela ezijwayelekile zokuqina nokuqina emuva kungenxa yomthwalo omningi kakhulu we-static, ukusakazwa okuncane kakhulu nokucindezela okukhulu kakhulu ngokumelene nomhlane ongezansi. Uma lokhu sikuthatha njengesiqalo, sifuna ukunikeza izeluleko ezilandelayo - futhi, njengoba kushiwo, lesi iseluleko esisinikeza nsuku zonke esimweni somtholampilo.
Ithiphu 1: Ukunyakaza
Ukuhamba okwengeziwe empilweni yansuku zonke. Uke wakuzwa ngaphambilini - futhi manje usukuzwile futhi. Ngeza amaphakethe ngomsebenzi omningi nokunyakaza empilweni yakho yansuku zonke. Uma ubuhlungu bukuvimbela emisebenzini nasekuzivocavoca umzimba, thintana nosodokotela ogunyaziwe ukuze uthole usizo.
Amathiphu 2: Trigger iphuzu Amabhola
Abakwazi ukuthatha indawo yomsebenzi wemisipha kusuka kuchwepheshe we-physiotherapist noma we-chiropractor wanamuhla, kepha abazona izilima. Ngokusebenzisa iqoqo le- inhlamvu iphuzu amabhola (bona isibonelo lapha ngenketho yokuthenga - kuvulwa ewindini elisha) zonke ezinye izinsuku - khumbula usuku lokuphumula phakathi kwezikhathi - ungakhuthaza ukusakazeka okwandayo ezindaweni ezinezicubu ezithambile ezizwelayo nezinhlungu nezicubu zomsipha.
Ithiphu 3: Isikhundla Sokuhlala Okungafani nge I-Ergonomic Coccyx
Ngabe umsebenzi wakho ubandakanya ukuhlala okuningi phambi kwe-PC (ngokuqondene nenombolo emangalisayo yethu)? Futhi awuthandi kakhulu ukusebenzisa imali eyi-10-15 eyizinkulungwane kusihlalo wehhovisi we-ergonomic onenani elikhulu? Ngemuva kwalokho umuntu angakwazi umqamelo we-ergonomic tailbone (bona isibonelo ngesixhumanisi lapha) ube yisixazululo esihle. Sincoma ngenjabulo ukuthi uguqule indawo ohleli kuyo usuku lonke lapho usebenzisa lo mcamelo. Igolide libiza ngoba liyashintsha lapho ngemuva uthola umthwalo lapho uhleli. Shintsha kaningi ukukhulisa ukuhlukahluka ngemuva. Umqondo ofanayo ungasetshenziselwa wena okhathazwa iqiniso lokuthi awutholi indawo enhle yokulala, kepha-ke ngalokhu umcamelo we-pelvic oguqulwe ngokukhethekile (bona isibonelo ngesixhumanisi lapha).
Zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi ku YouTube noma Facebook uma unemibuzo noma okunjalo maqondana nokuvivinya umzimba noma izinkinga zakho zemisipha namalunga. Ungabona futhi ukubuka konke kwe- imitholampilo yethu ngesixhumanisi lapha uma ufuna ukubhukha ukubonisana. Eminye yeminyango yethu yeMitholampilo Yezinhlungu ifaka phakathi Isikhungo se-Eidsvoll Healthy Chiropractor kanye nePhysotherapy (UViken) no Isikhungo seLambertseter Chiropractor nePhysiotherapy (Oslo). Nathi, ikhono lobuchwepheshe nesiguli kuhlala kubaluleke kakhulu.
IPHEPHA LOKUQALA: Okufanele Ukwazi Ngokudilika Kwezintamo
Chofoza esithombeni esingenhla ukuze uqhubeke ekhasini elilandelayo.
Funda futhi: - AU! Ingabe Ukuvuvukala Kwasemuva Noma Ukulimala Kamuva? (Ubuwazi ukuthi zombili zinezindlela ezimbili zokwelapha ezahluke kakhulu?)
Funda futhi: - Izeluleko ezi-8 ezinhle nezinyathelo zokulwa ne-sciatica ne-sciatica
(Sizama ukuphendula yonke imilayezo nemibuzo ngaphakathi kwamahora angama-24-48)
izithombe: I-Wikimedia Commons 2.0, i-Creative Commons, iFicestockphotos kanye neminikelo yokufunda ethunyelwe.
https://www.vondt.net/wp-content/uploads/ryggstrekking.jpg 468 625 olimalayo https://www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png olimalayo2017-06-07 21:34:152021-09-12 15:03:274 Ukuzivocavoca ngokumelene Nemisipha Node emuva
Ikhasi 1 kwezingu-34123>»